Xaajo.com – Xaajo.com: The latest Ogaden / Somaligalbeed News on the Net.. » Xafiiska Cabashooyinka DDSI oo laga furayo Jijiga
Xafiiska Cabashooyinka DDSI oo laga furayo Jijiga
November 21, 2012 - Written by xaajo - Edited byxaajo
Shirkii maalmahan loo fadhiyay caasimadda Jijiga ee loogu magacdaray wadatashiga shacabka iyo xukuumadda DDSI ayaa waxaa kamid ah waxyaalihii kasoo baxay in xukuumadda DDSI ay balanqaadday iney furi doonaan xafiiska Cabashooyinka ee xukuumadda.
Madaxweynaha DDSI Cabdi Maxamuud Cumar ayaa isagoo ka hadlaya arintan sheegey inay xafiiskan u furayaan in shacabku ay cabashooyinkooda geeyaan haddii ay jiraan arimo ay dhibsanayaan. ” Waxaa suura gal ah iney jiraan waxyaabo aanaan ogeyn oo ay dadku tirsanayaan ama ka cabanayaan waxaana xafiiskaas usameyn doonaa in la geeyo cabashooyinka” ayuu yidhi Madaxweyne CMC.
Dhanka kale isago la hadlayay kumayaalkii isugu yimid goobta ayuu madaxweynuhu sheegey inuu balanqaadayo inuusan marnaba khalad ula kac ah kusameyn doonin awooddiisa iyo shacabkiisa balse ay dhici karaan khaladaad taasna aan illaahay weydiisaneyno inuu talada wanaagsan iyo midda saxda ah na mariyo.
” Illaahay ha na toosiyo labada goaan midka saxda ahna hanagu duwo”
Madaxweynaha oo la hadlaya Qurba joogta ayaa yidhi ” Waxaad noo qabataan waxii aan sameyno ee runta ah. Hanoo maqlina cidna ee idinku arka oo nagu qabsada waxii xumaan ah ama khalad ah, sidoo kale waxii wanaag ah iyo waxqabadna nagu amaana”
Shirkan oo ahaa midkii ugu weynaa oo ay isugu yimaaddeen shacabkii ugu badnaa socdanaya ka badan Isbuuc ayaa waxaa dadkii meesha isugu yimid ay ku celceliyaan iney caqli iyo xoogba galiyaan sidii mucaaradka dalka looga soo afjari lahaa. Shirkan ayaa waxaa ka dhacay Alla Bari badan ducooyin iyo Habaar aad ubadan oo ay dadkii meesha isugu yimid qaylo dheer ku muujiyeen.
Isku soo duube waa talaabo wanaagsan oo shacabka usoo hoyatay in lasameeyo xafiis noocan ah, balse waxaa la sugayaa waxqabadka Xafiiska cabashooyinka deegaanka, sida uu ku bilawdo iyo cidda loo magacaabo iyo waliba waxa uu kusoo kordhin doono adeegyada xukuumadda DDSI.